Fifaninana Baolina Kitra isampokontany, karakarain’ny Ben’ny Tanana. | Commune Rural Sabotsy Namehana
Hatomboka ny ALahady 06 Martsa 2022 ho avy izao ny Lalaon’ny Baolina kitra izao lalaovin’ny olona 11 (Foot à 11) izay hatao amin’nny Kianja Herisetra RAFANODINA.
Mandray anjara amin’izany avokoa ny Fokontany 17, izay mandrafitra ny Kaominina Sabotsy Namehana. Ny Zanaky ny Kaomina Sabnam irery ihany no afaka mandray anjara, ary tsy hanavahana na izay manana licence na tsia. Ary ny milalao any amin’ny Fokontany misy azy avy izay hanaovan’ny Lehiben’ny Fokontany fanamarinana.
Izao no natao dia entina hampitombo ny lentan’ny Baolina Kita eto anivon’ny Kaominina.
Hisy ny amboara ho hatolotra hoan’ireo handresy amin’io Lalao io
Toy izao ny fandaharampotoana amin’ny Alahady
12ora : FKT SOANIDANANA # FKT AMORONDRIA
02 ora : FTK ATSINANANTSENA # FKT AMBOHINAORINA
Tsy misy ny vifdimpidirana,
Tongava maro hanotrona ny Ekipan-tsika
*** SARY FANEHOANA ***